काठमाण्डौ । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न पदमा १२९ जना कर्मचारी करारमा माग गरेको छ। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको यो कम्पनीमा साधारण लेखपढ गर्न जानेकादेखि लिएर स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेकाहरुलाई विभिन्न पदमा दरखास्त दिन आहवान गरिएको हो। कम्पनीले श्रेणी विहीनदेखि छैटौँ तहसम्मका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको...
काठमाण्डौ । नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि बुधबार दरखास्त आह्वान गरिएको छ। कम्पनीको सीईओमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधार पदपूर्ति गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो। यो पदका लागि योग्यता पुगेका नागरिकले १५ दिनभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ। आवेदन यो कम्पनी कार्यालय काठमाण्डौको नयाँब�...
लोकसेवा आयोगद्वारा चैत मसान्तसम्मका सबै लिखित परीक्षा स्थगित
काठमाण्डौ। कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि लोकसेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै लिखित परीक्षा स्थगित गरेको छ। आयोगको आज बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो। कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी चैत ७ गते शनिबारदेखि चैत मसान्तसम्मको लिखित परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको आयोगका उपसचिव...
रु. १.६० अर्बको आईपीओ निकाल्न लागेको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले माग्यो कर्मचारी, थुप्रैलाई अवसर
काठमाण्डौ । आउँदो चैत ४ गतेबाट १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले थुप्रै कर्मचारीका लागि शुक्रबार दरखास्त आह्वान गरेको छ। कम्पनीले पाँचौँ तहदेखि १० दसैँ तहसम्मका लागि प्रशासनतर्फ २२ जना कर्मचारी पदपूर्ति गर्न दरखास्त आह्वान गरेको हो। कम्पनीको छैटौँतर्फ सबैभन्दा धेरै ९ जना...
काठमाण्डौ । लोकसेवा आयोगले देशैभर राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) पदहरुमा एकैपटक थुप्रै कर्मचारी पदपूर्तिका लागि बुधबार दरखास्त खुलाएको छ। आयोगले निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधि), खुला र समावेश पदमा एकैपटक ७०८ जना कर्मचारी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। आयोगले न्याय, सामान्य प्रशासन र लेखा...
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य सेवातर्फ कर्मचारी माग, अन्तर्वार्ताबाटै छनोट
काठमाण्डौ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न बुधबार दरखास्त आह्वान गरेको छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा कार्यालयहरुका लागि स्वास्थ्य सेवामा चौथो तहदेखि नवौँ तहसम्मका लागि १४१ कर्मचारी करारमा...
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग्दै दरखास्त आह्वान गरेको छ । बोर्डले ११ पदमा १५ कर्मचारी माग्दै दरखास्त आह्वान गरेको हो । बोर्डले अधिकृत तहको निर्देशकदेखि सहायक तहसम्मका पदमा कर्मचारी मागेको हो । प्रशासन सेवाको निर्देशमा ४ जना, प्रशासनकै सहायक निर्देशकमा ३ जना, कानून सेवाको सहायक र्निेशकमा १ र...
एनआईसी एसिया बैंकले इन्ट्री लेभलमा थुप्रै कर्मचारी माग्यो, फ्रेस उम्मेदवारलाई अवसर
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुमध्ये आकर्षक प्रगति गरिरहेको एनआईसी एसिया बैंकले एकैपटक ठूलो संख्यामा ट्रेनी असिस्टेन्ट पदमा कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। बैंकले सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका आफ्ना शाखाका लागि ट्रेनी असिस्टेन्ट पदमा १५० जना कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लागेको हो। यो इन्ट्री लेभलको पद हो। यो...
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा फेरि खुल्यो जागिरको ठूलो अवसर, कसले कति मागे ?
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा फेरि ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर खुलेको छ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बलियो बैंक, नवील बैंकले ट्रेनी असिस्टेन्ट नामको इन्ट्री लेभलको पदमा एकैपटक ५० कर्मचारी माग्दै बुधबार सूचना जारी गरेको छ । सम्बन्धित विषयमा स्नातक लेभलको अध्ययन पूरा गरी २५ वर्ष ननाघेको व्यक्तिले यो पदका लागि आवेदन दिन...